Dhageyso: Jubaland oo ka digtay Kacdoon ka dhasha cadaadiska dowladda Federaalka. | XAL DOON
Home NEWS Dhageyso: Jubaland oo ka digtay Kacdoon ka dhasha cadaadiska dowladda Federaalka.
Dhageyso: Jubaland oo ka digtay Kacdoon ka dhasha cadaadiska dowladda Federaalka.
Madaxweyne kuxigeenka Jubbaland ayaa ka digay cadaadiska dowladda Federaalka ku heyso Jubbaland ay ka dhalan karto kacdoon bulsho, waxaana mar kale uu ugu baaqay dowladda Federaalka inay xoriyadiisa dib u soo celiyaan Wasiirkii Amniga Jubbaland.
Maxamuud Seyd Aadan oo Wariyayaasha kula hadlay magaalada Kismaayo, ayaa sheegay in hadaan la soo deyn Wasiir Janan ay ka dhalan karto Kacdoon Shacab, taasoo saameynteeda laga dareemi karo guud ahaan dalka.
Seyd Aadan oo soo hadal qaaday xarriga Wasiir Janan oo wax ka badan Bil u xiran dowladda ayaa shaaciyay in cid kasta oo wax tirsaneysay ay tagaan hay’adaha Garsoorka ee Jubaland, si loogu cadaalad falo, isagoo Su’aal galiyay in Muqdisho ay dacwad Jubaland ah qaado.
Si kastaba, dowladda Soomaaliya ayaa xirtay C/rashiid Janan 31-kii August, xili uu ku sii jeeday Itoobiya, waxaana laga qabtay garoonka Muqdisho, iyadoo bilowgii Todobaadkan la horgeeyay Maxkamada gobolka Banaadir.
Halkan Hoose ka dhageyso Codka Maxamuud Seyd Aadan: